गैरजिम्मेवार निजी अस्पतालमाथि कडा कारबाही आवश्यक : RajdhaniDaily.com -
Home बिचार गैरजिम्मेवार निजी अस्पतालमाथि कडा कारबाही आवश्यक
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति कमी गर्न सरकारले लकडाउन गरेर नागरिकलाई घरभित्रै बस्न आग्रह गर्दै आइरहेको छ । कोरोना संक्रमणसँग जुध्न सरकारले सबै प्रकारका रणनीतिहरू अवलम्बन गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकका सबै निकायले सरकारलाई सक्दो सहयोग पु¥याउनुपर्छ । ठूला खालका संकट र महाविपत्तिको सामना गर्न सरकार एक्लैले सक्दैन । नागरिक समाजका सबै क्षेत्रले यस्तो अवस्थामा सरकारको मात्रै मुख नताकेर आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग पु¥याउनुपर्छ ।
यतिखेर काठमाडांै उपत्यकालगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका निजी अस्पतालले सरकारलाई सहयोग गर्नुको साटो विभिन्न बखेडा निकालेर असहयोग गरिरहेका छन् । त्यति मात्रै होइन, रुघा, खोकी र ज्वरोको समस्या लिएर अस्पताल पुगेका बिरामीलाई धमाधम फर्काउँदै गैरजिम्मेवारीपना देखाएका छन् । निजी अस्पतालको यस प्रकारको प्रवृत्तिले उनीहरू विशुद्ध नाफाखोर रहेको प्रमाणित भएको छ । स्वस्थ रहन पाउनु मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधानले पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई सुुनिश्चित गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पतालमा उपचारका लागि गएका बिरामीलाई फर्काउनु कुन मानवीय धर्म हो ? के ती अस्पतालमा चिकित्सक छैनन् ? वास्तविक चिकित्सकले त नागरिकको सेवा गर्ने कसम खाएका हुन्छन् । के निजी अस्पतालमा रहेका चिकित्सक सबै नक्कली हुन् ? नत्र स्वास्थ्य समस्या लिएर गएका बिरामीलाई अस्पतालले फर्काउँदा किन उनीहरूको चित्त दुख्दैन ? अस्पतालका अधिकांश सञ्चालक गैरचिकित्सक छन् । उनीहरूको प्रमुख ध्याउन्न नै कसरी हुन्छ पैसा कमाउनेमा नै बित्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले सञ्चालकलाई मानवीय धर्म र कर्तव्यबारे संवेदनशील बनाउन सक्नुपर्छ । निजी अस्पतालहरूले सहज अवस्थामा सर्वसाधारण नागरिकसँग उपचारको बहानामा चर्को शुल्क असुल्ने गरेका छन् । तर, अहिले असहज परिस्थितिमा उपचार गर्न छोडेर नागरिकलाई जसरी फर्काउने काम गरिएको छ, त्यस्ता अस्पताललाई सरकारले पहिचान गरेर कालोसूचीमा राख्नुपर्छ । सरकारले उच्च पदाधिकारीहरूलाई बिदा दिएको छैन ।
ती पदाधिकारीहरूलाई सर्तकताका साथ निजी अस्पतालको अनुगमन गर्न पठाउनुपर्छ । रुघाखोकीको समस्या लिएर उपचार गर्न जाँदैमा निजी अस्पतालहरूले कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको आशंका पनि गर्नुहँुदैन । आफूलाई सुविधासम्पन्न र अत्याधुनिक भनेर दाबी गर्ने निजी अस्पतालहरूले आफ्ना चिकित्सकलाई सुरक्षित बनाएर बिरामीको उपचारमा लगाउन नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो । सरकारी अस्पतालको पनि अवस्था उस्तै छ । त्यहाँ त झन् चिकित्सक र साधनस्रोतकै अभाव छ । यस्तो संकटको अवस्थामा सर्वसाधारण सानोतिनो स्वास्थ्य समस्या लिएर सरकारी र निजी दुवै अस्पतालमा जाँदा ती अस्पतालबाट प्रभावकारी सेवा पाउनुको साटो उल्टो त्यसै फिर्ता हुनुपर्दा मुलुकमा सरकार नै नभएको अनुभूति गर्नसमेत बाध्य हुन सक्छन् । त्यसैले, त्यस्तो अवस्था आउन नदिन पनि सरकारका सरोकारवाला निकायले गैरजिम्मेवार बनिरहेका निजी अस्पताललाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया थाल्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भोलिदेखि निषेधाज्ञामा थप कडाइ गर्ने जनाएको छ । आइतबार बसेको जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) बैठकले सरकारी र...
ग्रामीण पर्यटनमा कोरोनाको प्रभाव
पर्यटन शब्दको कुरा गर्दा फ्रेन्च शब्द टुरिजमबाट उत्पत्ति भएको हो । सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने पर्यटन पर्यटकको माध्यमबाट सञ्चालन गरिने व्यवसाय हो ।...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनमा जाने कुरा गर्ने बित्तिकै धेरैको सातो गएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै उनले चुनाव घोषणा भएको र...
सेयरको मूल्यमा गिरावट आउनुको कारण ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सेन्च (नेप्से) परिसूचक कारोबारको अन्तिम समयसम्म आउँदा हिजो मंगलबार २३.२२ अंकले ओरालो लागेको छ । कारोबारको सुरुवातबाटै ओरालो लागेको नेप्से...
कालिकोट । जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नं ४ र ७ मा पहिरोमा परी नौ जनाको मृत्युु भएको छ । निरन्तर परेको अविरल वर्षाले स्थानिय...
Editor-Picks Dhruba Lamsal - May 4, 2020 0
जनकपुरधाम । धनुषामा एक श्रीमानले श्रीमतीको हत्या गरेर जंगलमा गाडेको ४ दिनपछि शव फेला परेको छ । धनुषाको मिथिला नगरपालिका वडा नं.९ लालभिट्टीका २८ वर्षिय...
मुख शरीरको प्रवेशद्वार र ऐना हो । टम्म मिलेका अनारका दानाझै सेता दाँत अनि गुलाफी गिजाले सौन्दर्यका लागि मात्र नभई शरीरमा भएका विभिन्न प्रक्रिया...
भर्खरै प्रशान्त वली - April 1, 2021 0
प्रदेश ७ Sushila Bishwokarma - June 3, 2020 0
डोटी । जिल्लाको शिखर नगरपालिका–९ दानकोट स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत अहेब रमेश कुँवरमाथि तीन जनाको समूहले आक्रमण गरी गम्भीर घाइते बनाएको छ । गाउँको बाटो हिँड्ने...
आर्सनलको शतप्रतिशत जित
डब्लिन । इंग्लिस क्लब आर्सनलले युरोपा लिगको समूह चरणको खेलमा शतप्रतिशत जित निकालेको छ । बिहीबार राति आयरल्यान्डको डुन्डाल्कलाई ४–२ ले पराजित गर्दै आर्सनलले...
लकडाउनको प्रभाव : प्रदूषणमा भारी सुधार, रेड जोनबाट झर्यो
Exclusive Roshan Shrestha - March 28, 2020 0
काठमाडौं । सरकारले मंगलबारदेखि सर्वसाधारणलाई घरबाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाएपछि काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकभरको प्रदूषणमा व्यापक सुधार आएको छ । सधैं प्रदूषणको ‘रेड जोन’ मा...
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – १५ चैत्र
कुरी-कुरी Rajdhani Daily - March 28, 2021 0
एजेन्सी - April 29, 2021